Kristy ao aminao - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Firy ny fanapahan-kevitra raisinao ao anatin'ny iray andro? An-jatony sa an'arivony? Manomboka amin'ny mifoha, inona no hotafiana, izay hohanina amin'ny sakafo maraina, na miantsena, na tsy tokony homena. Fotoana firy laninao amin'ny Andriamanitra sy ny manodidina anao. Tsotra ny fanapahan-kevitra sasany ary tsy mila eritreretina izany, fa ny hafa kosa mila fitandremana tsara. Ny fanapahan-kevitra hafa dia alaina amin'ny tsy fanaovana safidy - ahemorintsika mandra-pahatongany tsy ilaina intsony izany na mila hamono azy ireo toy ny afo isika. Toy izany koa ny eritreritsika. Azontsika atao ny misafidy izay alehan'ny saintsika, inona no hoeritreretina ary inona no hieritreritra. Ny fandraisana fanapahan-kevitra momba izay ho eritreretina dia mety ho mafy kokoa noho ny manapa-kevitra izay hohanina na hotafiana. Indraindray ny saiko mandeha any amin'izay tsy tiako, toa azy irery. Avy eo dia hitako fa sarotra ny mitazona ireo eritreritra ireo ary mamily azy ireo amin'ny làlana hafa. Ataoko fa mijaly noho ny tsy fahampian'ny fifehezana ara-tsaina isika ao amin'ny fampahalalana 24-ora ataontsika amin'ny fahafaham-po eo noho eo. Manana isika…
Nantsoin'i Martin Luther ho "mpanota sy olo-masina miaraka" ny Kristiana. Tany am-boalohany izy no nanoratra an'io teny io tamin'ny teny latina simul iustus et peccator. Simul dia midika hoe "miaraka" amin'ny teny alemà, ny iustus dia midika hoe "marina", et midika hoe "ary" ary ny peccator kosa dia midika hoe "mpanota". Raha raisina ara-bakiteny dia midika izany fa miaina ao anatin'ny ota sy fahotana isika amin'ny fotoana iray. Ny teny filamatr'i Lotera avy eo dia mety ho fifanoherana amin'ny teny. Saingy niresaka an-tsary izy ary te-hiresaka ny mifanohitra amin'izany fa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany dia tsy afaka amin'ny fitaoman-dratsy velively isika. Na dia mihavana amin'Andriamanitra (masina) aza isika dia tsy miaina fiainana tahaka an'i Kristy lavorary (mpanota). Rehefa namolavola an'io fitenenana io i Lotera dia nampiasa ny fitenin'ny Apôstôly Paul izy indraindray mba hanazavana mazava fa ny votoatin'ny filazantsara dia ny fanisana indroa. Amin'ny lafiny iray, ny fahotantsika dia isaina amin'i Jesosy sy amintsika ny fahamarinany. Ity fiteny teknika ara-dalàna amin'ny fampindram-bola ity dia ahafahana maneho izay ara-dalàna ary noho izany dia tena marina, na dia eo amin'ny fiainan'ny olona anaovana azy aza ...
Amin'ny faran'ny taona dia tadidintsika ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo. Teraka olombelona ny Zanak'Andriamanitra ary tonga teto ambonin'ny tany. Tonga olombelona toa antsika Izy, nefa tsy nanana ota. Tonga olombelona tokana tonga lafatra sy masina ara-bakiteny izy, toy ny namboarin'Andriamanitra hatrizay. Nandritra ny fiainany teto an-tany dia niaina an-tsitrapo tamin'ny fiankinana tanteraka tamin'ny Rainy izy ary nanao ny sitrapony. Jesosy sy ny Rainy dia iray amin'ny fomba mbola tsy niainan'ny olona hafa mandraka androany. Mampalahelo fa ilay Adama voalohany dia nifidy ny hiaina tsy miankina amin'Andriamanitra. Io fahaleovan-tena voafidy avy tamin'Andriamanitra io, ny fahotan'ilay lehilahy voalohany, dia nanimba ny fifandraisana akaiky amin'ny Mpamorona azy sy Andriamanitra. Loza inona ity ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Notanterahin'i Jesosy ny sitrapon'ny Rainy tamin'ny nahatongavany tety an-tany hanavotra antsika amin'ny fanandevozan'i Satana. Tsy nisy na iza na iza afaka nisakana azy tsy hanafaka antsika olombelona amin'ny fahafatesana. Noho izany, teo amin'ny hazofijaliana dia nanolotra ny ainy masina sy ny ainy ho antsika Izy ary nanao fanavotana ho an'ny helontsika rehetra ...
Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia famerenana amin'ny laoniny ny fiainana. Inona no fiantraikan'ny fiainan'i Jesosy tafaverina amin'ny laoniny amin'ny fiainanao isan'andro? Ao amin'ny taratasiny ho an'ny Kolosiana, i Paoly dia nanambara zava-miafina izay afaka miaina fiainam-baovao ao aminao: “Ianareo efa nianatra hatramin'ny voalohany, eny, izay nafenina taminao avy tamin'ny zanak'olombelona rehetra: zava-miafina izay efa naseho ankehitriny ho an'ny Kristiana rehetra. Momba ny fahagagana tsy takatry ny saina izay namboarin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ambonin'ny tany. Ianao izay an'Andriamanitra dia avela hahalala an'io zava-miafina io. Izao no vakiny: Kristy velona ao aminao! Ary noho izany dia manana fanantenana matanjaka ianao fa hanome anao ny voninahiny Andriamanitra "(Kl 1,26-27 HFA). Ilay ohatra Ahoana no niainan'i Jesosy ny fifandraisany tamin'ny Rainy fony izy teto an-tany? "Fa avy Aminy sy avy Aminy ary ho azy ny zavatra rehetra" (Rom 11,36 LUT)! Izany indrindra no fifandraisana misy eo amin'ny Zanaka amin'ny maha-Andriamanitra-olombelona sy ny Rainy ho Andriamanitra. Avy amin'ny ray, amin'ny alàlan'ny ray, mankany amin'ny ray! “Izany no antony nilazan'i Kristy tamin'Andriamanitra fony tonga teto amin'izao tontolo izao izy: Tsy nitady sorona na fanomezana hafa ianao. Fa manana vatana ho ahy ianao ...
Fiainana iza no ho very ary iza no ho azo?
Tsy niresaka tamin'ny tononkalo na fanoharana i Paoly rehefa nilaza fa "ao aminao Jesosy Kristy". Ny tena tiany holazaina amin'izany dia hoe i Jesosy Kristy dia mitoetra ao amin'ny mpino tokoa. Tahaka ny Korintiana, dia mila mahafantatra an'io momba ny tenantsika isika. I Kristy dia tsy eo ivelantsika fotsiny, mpanampy sahirana, fa mitoetra ao amintsika Izy, miaina ao amintsika sy miaraka amintsika mandrakariva.
«Manome anao manome fo vaovao sy fanahy vaovao ao anatinao aho ary te hanaisotra ny fo vato hiala amin'ny nofonao ary hanome anao fo feno hena» (Ezekiela 36,26).
“Mipetraka aho na mifoha, izany no ahalalanao azy; azonao lavitra ny eritreritro. Mandeha aho na mandainga, ka manodidina ahy ianao ary mahita ny lalako rehetra. Fa, indro, tsy misy teny eo amin'ny lelako fa tsy fantatrao, Tompoko, ny zavatra rehetra. Manodidina ahy amin'ny lafiny rehetra ianao ary mitazona ahy ny tananao. Mahafinaritra loatra ity fahalalana ity ary avo loatra ho ahy, tsy azoko izany » (Salamo 139,2: 6).
"Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia mitoetra ao amiko, ary Izaho ao aminy" (Jaona 6,56).
«Ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina satria sady tsy mahita no tsy mahalala azy. Fantatrao izy satria mitoetra eo aminao izy ary ho ao aminao » (Jaona 14,17).
"Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin'ny Raiko ary ianareo ato amiko ary Izaho ao aminareo" (Jaona 14,20).
«Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izay tia ahy dia hitandrina ny teniko; ary ho tian'ny raiko izy, ary hankeo aminy izahay ka hiara-mipetraka aminy » (Jaona 14,23).
«Mitoera ao amiko, ary Izaho ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy afaka mamoa ho azy raha tsy mijanona eo amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy mijanona amiko » (Jaona 15,4).
"Izaho ao amin'izy ireo ary ianao ato amiko, mba ho iray tanteraka izy ireo ary ho fantatr'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy sy hitia azy ireo tahaka ny itiavanao ahy" (Jaona 17,23).
"Ary efa nampahafantariko azy ireo ny anaranao ary hampahafantariko azy mba ho ao aminy ny fitiavana izay itiavanao ahy ary Izaho ao aminy" (Jaona 17,26).
"Izay no ahazoako mirehareha amin'i Kristy Jesosy fa manompo an'Andriamanitra" (Romana 15,17).
"Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny Fanahin'Andriamanitra mitoetra no anatinareo?" (1 Korintiana 3,16).
“Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no naha-izaho ahy. Ary ny fahasoavany tato amiko tsy foana tsy akory, fa niasa betsaka kokoa noho izy rehetra aho; fa tsy izaho, fa ny fahasoavan'Andriamanitra amiko » (1 Korintiana 15,10).
"Fa Andriamanitra, Izay nanao hoe: Ny mazava hamirapiratra amin'ny maizina, dia nanome fahazavana mamirapiratra ao am-ponay hisehoan'ny fahazavana ho an'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny tavan'i Jesosy Kristy" (2 Korintiana 4,6).
"Fa manana ity rakitra ity amin'ny vilany tany isika, mba ho avy amin'Andriamanitra ny hery be fa tsy ho antsika" (2 Korintiana 4,7)
«Fa isika izay velona dia natao maty mandrakizay noho ny amin'i Jesosy, mba haseho ao amin'ny nofonay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa mahery ao amintsika ny fahafatesana, fa ao aminao ny fiainana » (2 Korintiana 4,11: 12).
"Mangataka porofo ianareo fa miteny ato amiko Kristy, izay tsy malemy aminareo, fa mahery eo aminareo" (2 Korintiana 15,3).
«Manontania tena raha avy amin'ny finoana ianao; jereo ny tenanareo! Sa tsy fantatrareo ao amin'ny tenanareo fa ao aminareo Jesosy Kristy? " (2 Korintiana 15,5).
"Fa raha sitrak'Andriamanitra, Izay nanokana ahy tamin'ny kibon'ineny sy niantso ahy tamin'ny fahasoavany, 16 fa nasehony ahy ny Zanany mba hitoriako amin'ny filazantsara any amin'ny jentilisa, dia tsy niresaka ny amin'ny tenako aho ny nofo sy ny rà » (Galatiana 1,15: 16).
«Velona aho, fa tsy izaho izao, fa Kristy velona ato amiko. Fa izay ivelomako amin'ny nofo ankehitriny, dia velona amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy » (Galatiana 2,20).
"Anaka, izay haterako indray amin'ny fanaintainana mandra-pahatongan'i Kristy endrika ao anatinareo!" (Galatiana 4,19).
"Amin'ny alalany koa no hampiorenana anao ho fonenan'Andriamanitra amin'ny Fanahy" (Efesiana 2,22).
«Mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Ary miorim-paka sy miorina amin'ny fitiavana » (Efesiana 3,17).
"Andriamanitra no naniry hampahafantatra azy ny haren'ny voninahitr'ity zava-miafina ity amin'ny vahoaka, dia Kristy ao anatinareo, ilay fanantenana voninahitra" (Kolosiana 1,27).
"Fa ao aminy no misy ny fahafenoan'ny fahamasinana manontolo, araka ny nofo, 10 ary ao aminy no hahatanterahanareo izay lohan'ny fahefana sy fahefana rehetra" (Kolosiana 2,9: 10).
"Tsy misy intsony ny Grika na Jiosy, voafora na tsy voafora, tsy Grika, Skytianina, andevo, mpanenjika, fa ny zavatra rehetra ary ao amin'i Kristy rehetra" (Kolosiana 3,11).
«Izay renao hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao aminao. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny Zanaka sy ny Ray koa ianareo » (1 Jaona 2,24).
«Ary ny hosotra izay noraisinao taminy dia mitoetra ao aminao, ka tsy mila olona hampianatra anao ianao; fa tahaka ny anosoran'ny fanosorana azy ny zavatra rehetra, dia marina izany fa tsy lainga, ary tahaka ny nampianarany anao, dia tomoera ao aminy » (1 Jaona 2,27).
«Ary izay mitandrina ny didiny dia mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Ary izao no ahalalantsika fa mitoetra ao amintsika izy: amin'ny fanahy nomeny antsika » (1 Jaona 3,24).
«Anaka, avy amin'Andriamanitra ianareo ka efa naharesy azy; satria izay ao aminao dia lehibe noho izay eo amin'izao tontolo izao » (1 Jaona 4,4).
«Rehefa tonga Izy, mba hankalazaina eo amin'ny olony masina, ary hiseho ho gaga amin'ny mpino rehetra amin'izany andro izany; satria nino izay nambaranay taminao » (2 Tesaloniana 1,10).